Taariikh nololeedka Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Taariikh nololeedka Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka
General C/wali Jaamac Xuseen (Gorod) waxa uu ku dhashay magaaladda Muqdisho sanadkii 1950-kii, Iskuulka hoose dhexe waxa uu ka dhigtay dugsiga Macalin Jaamac, Dugsiga sarena waxa uu ka gallay iskuulka farsamada gacanta ee magaaladda Muqdisho.
General Gorod waxa uu ciidanka qortay 1966-dii, Dalka Ruushka ayaa tababar loogu diray 1975-tii, waxuuna waxbarashada luuqada ruushka ka bilaabay magaalada Furanza ee dalkii la oran jiray Midowga Sofyeeti, 1977-dii waxa uu duulimaadka diyaaradaha ka bartay Akademiyada Karasnadaar ee dalka Ruushka .
Dalka ayuu dib ugu soo laabtay isagoo xidigle ah, Waxaana la geeyey xerada ciidanka cirka ee Balidoogle, 1980-kii waxa uu qaaday xidigii labaad waxaana loo badalay xeradii ciidanka cirka ee duleedka Magaaladda Kismaayo, halkaasoo uu ku bartay duulimaadyada diyaaradaha xamuulka ciidanka.
1984-tii waxa uu qaatay darajada sadax xidigle waxaana loo badalay magaaladda Hargeysa, Waxuuna berrigaasi duulin jiray diyaaradaha ciidanka ee loo yaqaano Biyaajo 160 oo Talyaaniga lagu farsameeyo.
1988-dii waxaa lagu soo celiyey xerada ciidanka cirka ee Kismaayo, Seddex bilood ka dibna waxaa loo badalay Magaaladda Muqdisho, waxuu cilmi kororsi luuqadaha ah ka bilaabay machadkii la oran jiray OMC oo dowladda Maraykanka ay gacanta ku haysay, isagoo noqday gaashaanle sare, gaashaanle sare isagoo ah ayayna burburtay dowladii dhexe.
Jeneral Gorod dowladdii Carte ee Cabdiqaasim Salaad ayuu ka noqday wasiirka dekadaha, Labo sano ayuuna hayay xilkaasi.
Generalka wuxuu dhalay siddeed caruur, Waxuuna degan yahay magaaladda London.
Previous articleGolaha Wasiirada oo soo dhoweeyey baaqii Madaxweynaha ee Midnimada iyo Wadashaqeynta hay’adaha dawliga ah
Next articleMan terrorised for renting shop to a Somali